Vaovao - Fantatrao ve ny mari-pana fanodinana ranomainty?
Fantatrao ve ny hafanan'ny fanodinana vera fitaratra?
1. Ranomainty fitaratra maripana avo lenta, antsoina koa hoe ranomainty vera mahamay be, ny mari-pana sinteria dia 720-850 ℃, aorian'ny fifehezana ny maripana ambony, ny ranomainty sy ny vera dia mifangaro miaraka. Ampiasaina be amin'ny fananganana rindrina ambain, vera fiara, vera elektrika sns.
2. Ranomainty feno vera: ny ranomainty feno vera dia fomba fanamafisana 680 ℃ -720 ℃ fanaova avy hatrany ny hafanana sy fampangatsiahana eo noho eo, ka ny pigmenta fitaratra sy ny vatan'ny vera dia afangaro ho vatana iray, ary ny firaiketam-po sy ny faharetan'ny loko dia tanteraka. Aorian'ny fanatsarana sy fanamafisana ny loko Ny vera dia manan-karena loko, ny firafitry ny vera dia matanjaka, matanjaka, azo antoka ary manana fanoherana sasany amin'ny harafesin'ny atmosfera ary manana fanoherana harafesina tsara sy hery afenina.
3. Ranomainty fanendasa vera: fanaovana mofo mafana ny hafanana ambony, 500 degre eo ho eo ny mari-pana. Izy io dia be mpampiasa amin'ny vera, seramika, fitaovana fanatanjahan-tena ary indostria hafa.
4. ranomainty vera ambany mari-pana: Aorian'ny fofona amin'ny 100-150 ℃ mandritra ny 15 minitra dia manana firaiketam-po tsara sy fanoherana mahery vaika ny ranomainty.
5. Ranomainty fitaratra mahazatra: ny fanamainana voajanahary, ny fotoana fanamainana ambonin'ny tany dia 30 minitra eo ho eo, eo amin'ny 18 ora. Mety amin'ny fanontana amin'ny taratasy adhesive vita amin'ny vera sy polyester.